အဆိုပါ Symetra ခရီးစဉ်: အ LPGA မှဂေါက်ကွင်းရဲ့လမ်းမ
သင်ကဂေါက်သီးရဲ့ Symetra ခရီးစဉ်အကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်ကဘာလဲ
'' ပု LPGA ဖို့လမ်းမကြီး '' များအတွက် 2018 အချိန်ဇယားအပါအဝင်
အဆိုပါ Symetra ခရီးစဉ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌မိန်းမတို့အဘို့ဒုတိယအဆင့်ကြေးစားဂေါက်သီးခရီးစဉ်သည် LPGA Tour နောက်ကွယ်မှအဆင့်ဒါပေမယ့်ရှေ့ဆက်အခြားဒေသဆိုင်ရာ Mini-ခရီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Symetra ခရီးစဉ်ဟာ LPGA ၏တရားဝင်ဖွံ့ဖြိုးရေးခရီးစဉ်ဖြစ်ပြီးချစ်စနိုးဖြစ်ပါတယ် "ဟုအဆိုပါ LPGA ဖို့လမ်း။ "
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအမျိုးသမီးဂေါက်သီးအဆိုပါခရီးစဉ်ရဲ့ပြိုင်ပွဲအတွက်လယ်ကွင်းတက်ပါစေ။ ပိုက်ဆံ Symetra ခရီးစဉ်ဖြစ်ရပ်များအတွက်ကစားရရှိခဲ့ပြီးအကျိုးအမြတ်မရပေမယ့်ကြီးမားတဲ့ဆုသည့် Symetra ခရီးစဉ်မှတဆင့် LPGA ပေါ်သို့တစ်ဦးဂေါက်သီးကစားသမားသူမ၏လမ်းများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါခရီးစဉ်သည် 1981 ခုနှစ်တွင်မှစတငျရထားတဲ့သူ့ရဲ့သမိုင်း, စဉ်အတွင်းမျိုးစုံအမည်များကိုအောက်တွင်တည်ရှိပြီးတော့တစ်ဦးဖလော်ရီဒါအခြေစိုက် circuit ကိုအဘယျသို့ခဲ့သည့် Tampa Bay တွင် Mini ကိုလှည့်လည်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ 1983 ခုနှစ်မှာ "Futures Tour" အဘယ်သူ၏အရာရှိတဦးကအမည်များကိုနှစ်ပေါင်းများစွာ Futures ဂေါက်လှည့်လည်, Duramed Futures ခရီးစဉ်နှင့် LPGA Futures ခရီးစဉ်များပါဝင်သည်တိုက်နယ်, များအတွက်အသုံးအများဆုံးနာမကိုအမှီဖြစ်လာခဲ့သည်
2011 ခုနှစ်, Symetra တစ်ဦးအာမခံနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုကုမ္ပဏီ, ထိုခရီးစဉ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကမကထပြုသူဖြစ်လာခဲ့သည်, ပြီးတော့ကတည်းကခရီးစဉ်ရဲ့နာမညျကို Symetra ခရီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
Symetra ခရီးစဉ်နှင့် LPGA Tour ၏ relationship
အဆိုပါ LPGA Tour, ဇူလိုင်လ 2007 ခုနှစ်ကတည်းကအဆိုပါ Symetra ခရီးစဉ်ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ (Symetra ခရီးစဉ်စစ်ဆင်ရေးကိုတိုက်ရိုက်ကြီးအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအရာရှိများကကြီးကြပ်ကြသော်လည်း LPGA ကော်မရှင်နာမိုက်ကယ် Whan လည်း Symetra ခရီးစဉ်ရဲ့ကော်မရှင်နာဖြစ်ပါသည်။ )
1999 ကတည်းက Symetra ခရီးစဉ် (ထို့နောက် Futures ခရီးစဉ်ကိုခေါ်) ကို LPGA ဖို့ Symetra ခရီးစဉ်ရဲ့ထိပ်တန်းဂေါက်သီး "ဘွဲ့ရ" ၏သေးငယ်တဲ့အရေအတွက် LPGA ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာခရီးစဉ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားနှင့်နှစ်စဉ်ထားပြီး: သူတို့ကအောက်ပါအဘို့အ LPGA Tour အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဝင်ငွေ နှစ် Symetra ခရီးစဉ်ပိုက်ဆံစာရင်းတွင် High-အလုံအလောက်ချောအပေါ်အခြေခံပါတယ်။
လက်ရှိထိုအချိန်တွင် Symetra ခရီးစဉ်ရဲ့နှစ်ကုန်ပိုက်ဆံစာရင်းတွင်ထိပ်တန်း 10 ဦးတွင်အပြီးသတ်သူဂေါက်သီး LPGA အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဝင်ငွေ။ ပိုက်ဆံစာရင်းတွင်နောက်တစ်နေ့ 12 ဂေါက်သီး၏နောက်ဆုံးဇာတ်စင်သို့ကင်းလွတ်ခွင့်ဝင်ငွေ LPGA Q-ကျောင်း ။ (ဤနံပါတ်များကိုအခါအားလျော်စွာ LPGA ဖွငျ့မြှကြသည်။ )
အဆိုပါ Symetra ခရီးစဉ်အပေါ်တစ်ခုတည်းရာသီအတွက်သုံးကြိမ်အနိုင်ရရှိသူကိုမဆိုဂေါက်သီးဟာ LPGA Tour မှအလိုအလျှောက်အဆင့်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်။
2018 Symetra ခရီးစဉ်ဇယား
2018 ရာသီများအတွက် Symetra ခရီးစဉ်အချိန်ဇယားအပေါ် 22 ပြိုင်ပွဲရှိပါတယ်:
မတ်လ 9-11: Clearwater, Fla အတွက် Feather အသံမှ Country Club မှာ SGIC Kickoff ဂန္ထဝင်။
မတ်လ 16-18: ဆောင်းရာသီ Heaven, Fla အတွက်ဆောင်းရာသီ Haven မှ Country Club မှာဖလော်ရီဒါရဲ့သဘာဝဒါနဂန္ထဝင်။
ဧပြီလ 6-8: Beaumont, ကာလီဖိုးနီးယားအတွက် Tukwet Canyon အမှာ Morongo ဂေါက်ကလပ်မှာ IOA ချန်ပီယံရှစ်။
မေလ 4-6: မီလ်တန်, Ga အတွက်အတ္တလန်တာအမျိုးသားဂေါက်ကလပ်မှာ IOA ဖိတ်ကြားချက်ကို။
May 10-13: Greenwood, SC အတွက် Stoney အဘိဓါန်ပွိုင့်မှာ Links များမှာကိုယ်ပိုင်ဒေသဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ
မေလ 17-19: Symetra Classic, တည်နေရာ TBA
မေလ 24-26: Pottstown, Pa အတွက် Raven ရဲ့ခြေသည်းဂေါက်ကလပ်မှာချိုင့် Forge ရဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်။
ဇွန်လ 8-10: လေးလေပြေတောင်ကွေး, Ind အတွက် Blackthorn ဂေါက်ကလပ်မှာ Invitational ။
ဇွန်လ 15-17: Decatur, မကျန်းမမာအတွက် Hickory ပွိုင့်ဂေါက်ကွင်းမှာ Decatur-Forsyth ဂန္ထဝင်။
ဇွန်လ 22-24: Harris က, Mich အတွက် Sweetgrass ဂေါက်ကလပ်မှာကျွန်း Resort ကိုချန်ပီယံရှစ်။
ဇွန်လ 29-ဇူလိုင်လ 1: Maineville, အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်အတွက် TPC မြစ်ရဲ့ကွေးမှာ Prasco ဒါနချန်ပီယံရှစ်
ဇူလိုင်လ 12-14: ပြင်သစ်ကိုလျက်, Ind အတွက်ပြင်သစ်ကိုလျက် Resort ကိုမှာ Donald ရော့စ်ဂန္ထဝင်။
ဇူလိုင်လ 19-22: Rochester, NY အတွက် Brook Lea Country Club မှာဒန်ယဲလ် Downey ခရက်ဒစ်ယူနီယံ Classic
ဇူလိုင်လ 27-29: Capital ကိုတောင်တန်းများအယ်လ်ဘာနီအတွက်ဂေါက်ကလပ်, နယူးယော့မှာနယူးယော့၏ Fuccillo Kia Classic
သြဂုတ်လ 10-12: PHC ကိုဂန္ထဝင် Milwaukee, Wisc အတွက်ဘရောင်းမင်ပန်းခြံဂေါက်ကွင်းမှာ။
သြဂုတ်လ 17-19: FireKeepers ကာစီနိုဟိုတယ်ချန်ပီယံရှစ်တိုက်ပွဲ Creek အဘိဓါန်, Mich အတွက်တိုက်ပွဲ Creek အဘိဓါန်မှ Country Club မှာ။
သြဂုတ်လ 30-စက်တင်ဘာ။ 2: Sioux ရေတံခွန်, SD ကအတွက် Willow Run ကိုဂေါက်ကလပ်မှာ Sioux ရေတံခွန် GreatLife စိန်ခေါ်မှု
စက်တင်ဘာလ 7-9: ဥယျာဉ်စီးတီး, ကံအတွက် Buffalo သဲခုံဂေါက်ကလပ်မှာဥယျာဉ်မြို့တော်ပရဟိတဂန္ထဝင်။
စက်တင်ဘာလ 14-16: ပြိုင်ပွဲ TBA
စက်တင်ဘာလ 21-23: Prattville, Ala အတွက် Capitol Hill ဂေါက်ကလပ်မှာဂါးဒီးယန်းချန်ပီယံရှစ်။
စက်တင်ဘာလ 28-30: Longwood, Fla အတွက် Alaqua Country Club မှာ IOA ဂေါက်သီးဂန္ထဝင်။
အောက်တိုဘာလ 4-7: Daytona သဲသောင်ပြင်, Fla အတွက် LPGA အင်တာနေရှင်နယ်မှာ Symetra Tour Championship ပြိုင်ပွဲ (ဂျုံးစ်သင်တန်းအမှတ်စဥ်) ။
Symetra ခရီးစဉ်ဆုကို Winners
အဆိုပါခရီးစဉ် 1984 ကတည်းကနှစ်တိုင်းတစ်နှစ်တာ၏ Player ကိုအမည်နှင့် 2000 ခုနှစ်တစ်နှစ်တာ၏လူသစ်နှင်းအပ်ခဲ့ပါစတင်ခဲ့ပြီ
ခုနှစ် တစ်နှစ်တာ၏ Player ကို တစ်နှစ်တာ၏လူသစ်
2017 Benyapa Niphatsophon ဟန္နအစိမ်းရောင်
2016 Madelene Sagstrom Madelene Sagstrom
2015 Annie ပန်းခြံ Annie ပန်းခြံ
2014 Marissa Steen min Lee က
2013 PK Kongkraphan Giulia Molinaro
2012 ဧသတာ Choe mi Hyang Lee က
2011 ခုနှစ် ကက်သလင်း Ekey Sydnee Michael
2010 Cindy ဟော် ဂျနီဖာသီချင်း
2009 Mina Harigae Mina Harigae
2008 ဗစ်ကီ Hurst ဗစ်ကီ Hurst
2007 ခုနှစ် အမ်မလီ Bastel Violeta Retamoza
2006 သီချင်း-Hee သည်ကင်မ် သီချင်း-Hee သည် Kimg
2005 Seon-Hwa Lee က Sun ကလူငယ် Yoo
2004 Jimin Kang ရှုရိချို
2003 Stacy Prammanasudh Sun ကလူငယ်မွန်း
2002 Lorena Ochoa Lorena Ochoa
2001 ခုနှစျ ဗက် Bauer ဗက် Bauer
2000 ဟဲလ် Zakhar ဂျေမီ Hullett
1998 Michelle ဘဲလ်
1997 အဆိုတော် Marilyn Lovander
1996 Vicky Moran
1995 Patti Ehrhart
1994 အဆိုတော် Marilyn Lovander
1993 Nancy Bowen တို့
1992 ဂျိုဒီ Figley
1991 ကင်မ် Williams က
1990 Denise Baldwin
1989 ခုနှစျ ဂျနီဖာ MacCurrach
1988 ဂျဲနီ Lidback
1987 Laurel Keane
1986 Tammie အစိမ်းရောင်
1985 Tammie အစိမ်းရောင်
1984 ပဲန်နီ Hammel
all-အချိန် Best: Symetra ခရီးစဉ်မှတ်တမ်း
အဆိုပါ Symetra ခရီးစဉ်များအတွက် All-အချိန်အမှတ်ပေးမှတ်တမ်းများအနည်းငယ်နှင့်အတူစတင်ဖွင့်ကြပါစို့။ တစ်လေးလုံးနေ့ပြိုင်ပွဲ (72 တွင်း) အဘို့, ခရီးစဉ်သမိုင်းထဲမှာနိမ့်ဆုံးကအနိုင်ဂိုးရမှတ်သုံးရက်ကြာပြိုင်ပွဲ (54 တွင်း) အတွက် 2010 ခုနှစ်ဂျနီဖာသီချင်းအားဖြင့်သတ်မှတ်ထား, 261 ဖြစ်ပြီး, ယင်းစံချိန်စံချိန်ဗစ်ကီအားဖြင့်မျှဝေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါက 198. ဖြစ်ပါသည် Hurst (2008) နှင့်ခရစ္စသီချင်း (2010) ။
အဆိုပါအသက် 18-ပေါက် Symetra ခရီးစဉ်အမှတ်ပေးစံချိန်ခရီးစဉ်သမိုင်းအတွက်နှစ်ကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားသော, 61 ဖြစ်ပြီး, နှစ်ဦးစလုံးအတူတူပြိုင်ပွဲ၌တည်၏။ အဆိုပါပြိုင်ပွဲ Decatur, မကျန်းမမာအတွက် Hickory ပွိုင့်ဂေါက်ကလပ်မှာချန်ပီယံရှစ် 2010 ကိုတိတ် & ရှိထားကစားသမားဖြစ်ခဲ့သည်။ ရာခေလသည်ကော်နာနှင့်ဂျနီဖာသီချင်းရှိပါတယ် 61s posted သူနှစ်ဦးကိုဂေါက်သီး။ ထိုအဟုတ်, ထိုသီချင်းအတွက် 72-ပေါက်စံချိန်သတ်မှတ်ထားဘယ်မှာတူညီတဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။
ခရီးစဉ်သမိုင်းထဲမှာနိမ့်ဆုံး 9-ပေါက်ရမှတ် 2002 ခုနှစ်တွင်ဆူး Ginter-Brooker အားဖြင့်သာတည်, 28 ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Symetra ခရီးစဉ်အပေါ်တစ်ခုတည်းရာသီအတွက်အများစုမှာအနိုင်ပေး? Laurel Keane အဆိုပါ Symetra ခရီးစဉ်အပေါ် 1987 အများစုမှာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုအနိုင်ပေးကိုးပြိုင်ပွဲအနိုင်ရ? Tammie အစိမ်းရောင်ပု LPGA Tour မှတက်ရွေ့လျားမတိုင်မီ 11 ကြိမ်စုစုပေါင်းအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
အရှည်ဆုံးရရှိခဲ့များအတွက်စံချိန် - တတန်းအတွက်အများဆုံးစတင်အနိုင်ရ - သုံးဖြစ်ပါတယ်။ lynn Connelly (1983), Tammie အစိမ်းရောင် (1986), ဂျနီဖာ MacCurrach (1989) နှင့်ဗစ်ကီ Hurst (2008) လုံးကိုသုံးနှစ်ဆက်တိုက်ပြိုင်ပွဲအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
ထိုအ Symetra Tour သမိုင်းမှတ်တမ်းထဲတွင်အသက်အငယ်ဆုံးအနိုင်ရသူမ 2015 Gateway မှာဂန္ထဝင်အနိုင်ရသည့်အခါ 16 နှစ်, ကိုးလနှင့် 11 ရက်အတွင်းနှစ်အရွယ်မှာသူကိုဟန္န O'Sullivan ဖြစ်ပါသည်။
အမေရိကန်ပွင့်လင်းဂေါက်သီးရိုက်လက်မှတ်တွေ Get လုပ်နည်း
2016 ဗြိတိန်ပွင့်လင်း: Stenson ခြင်းဖြင့်စံချိန်တင်-Breaking ဝင်း
အဘယ်ကြောင့်ဒါကခေါ် '' အာမင်ထောင့် '' နှင့်အဘယ်သူသည်အမည်နှင့်အတူတက် လာ. လား?
အမေရိကန်ပွင့်လင်း PLAYOFF Format ကိုဆိုတာဘာလဲ
စကတ် LPGA ထိုင်ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲ Swinging
LPGA Kingsmill ချန်ပီယံရှစ်ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲ
သိပ္ပံအဘို့အစီရင်ခံစာ Card ကိုမှတ်ချက်
Que es el estatus PRUCOL y က Que inmigrantes están amparados
သင့်ရဲ့ crystal ဟာနှင့်ကျောက်မျက်ရတနာကိုစင်ကြယ်စေခြင်းနှင့်ရှင်းလင်းဖို့ကိုဘယ်လို
သင့်ရဲ့မိသားစုသစ်ပင်အွန်လိုင်းရှာဖွေခြင်းတို့အတွက် 10 ခြေလှမ်းများ
Excel ကို ISBLANK ရာထူးအမည်
Capricorn နဲ့ Capricorn မတ်ေတာသအသုံးပြုပုံများ
ချန်ပီယံလိဂ်ရေကူးကန်နည်းစနစ် - ဤ Shot သင့်ရည်ရွယ်ချက်လေ့
မရဏ၏ Sparrow Messengers ဖြစ်ပါသလား
ယောလ Roberts သည် Poinsett ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
Element ကိုအဖွဲ့များ၏ periodic ဇယား
တစ်ခုကငါးခူနှင့် Bullheads မှမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်သူတို့၏မှတ်တမ်းအလေးချိန်
အီတလီအတွက်ကြိယာ "Imparare" Conjugate လုပ်နည်း
တစ်ဦးဂျာဗား Identifier ဆိုတာဘာလဲ
ဝေါဟာရဇယား - ESL သင်ခန်းစာအစီအစဉ်
အဆိုပါ Belle Époque ( "လှပသောခေတ်")
ကောငျးကငျတ Chamuel အသိအမှတ်ပြုလုပ်နည်း